Ungakwazi yini ukungisiza ukuba ngiqonde izinzuzo eziyinhloko zamawebhusayithi aphezulu we-PR we-backlink?
Yiqiniso, uma ufuna ukujabulela intuthuko yangempela, ebonakalayo ku-SEO, kubalulekile ukwakha iphrofayli yokuxhumanisa kwekhwalithi kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Namuhla, kunezici ezintathu eziyinhloko ezenza iphrofayela "ekahle" ye-backlink - ukubaluleka kwayo, ubuningi, kanye nekhwalithi. Kubonakala sengathi zonke izixhumanisi zekhwalithi zakhiwe ngendlela yemvelo futhi zivela kwimithombo ethembekile kuphela enekhasi eliphakeme le-PageRank, igunya lesikhulu, igunya lekhasi, njll.Kodwa ingabe kusho ukuthi kufanele ukhethe amawebhusayithi aphezulu e-PR kuphela ama-backlink?
Ngikholelwa ukuthi cha, akunjalo. Kungani kunjalo? Kungenxa yokuthi izinto zangempela ziyinkimbinkimbi kakhulu. Ngisho ukuthi ukuba namawebhusayithi amaningi aphezulu we-PR okwenziwe nge-backlink ngangokunokwenzeka angeke akuvumele ukuthi ufike kuphi. Ngempela, singathola kalula i-PR9 entsha noma mhlawumbe ngisho ne-backlink ye-PR10, isibonelo kusuka ku-WordPress. Konke kungagcwaliswa nje ngemizuzu - futhi usuqedile. Ngakho-ke, ingabe i-backlink enjalo ingabe iyazuza, ucabanga kanjani? Eqinisweni, akukho lutho oluqinisekisa i-backlink esanda kufakwa. Ngisho ukuthi i-backlink ngayinye ehlukile izobe ingacaci futhi ingabikho ngaphandle kokuthi ibe ingxenye engokwemvelo yephrofayli yokuxhumanisa kahle. Yingakho ngincoma ukubheja ngobuningi ukwakha izixhumanisi nezindawo eziningi zamapulangwe ngaphandle, okumele kube nokuhlukahluka kwamamethrikhi ahlukene, okwamanje kufaka phakathi izikolo ezingalingani zekhasi le-PageRank.
Noma kunjalo, kusabalulekile kakhulu ukuba nenani elanele lamawebhusayithi aphezulu we-PR okwe-backlinks. Into yukuthi izinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google ngokwayo zisebenzisa isethi yezici ezintathu eziyinhloko (i. e. , ukuhambelana, ukuhlukahluka, kanye nekhwalithi - okwenziwe ngegalelo nge-PR impahla) ukucacisa isisindo sangempela kanye nokufaneleka kwe-backlink yonke kuphrofayela yakho yewebhusayithi. Cabanga ngezinzuzo ezilandelayo eziyinhloko zokusebenzisa amawebhusayithi aphezulu we-PR ngezindawo zangemuva. Khumbula, noma kunjalo, ukuthi uzokwazi ukuwajabulela kuphela uma uthola okuqukethwe okuphezulu futhi okufanelekile.
Izinzuzo eziphambili ze-High PR Backlink:
Ukubukeka okusemthethweni kwewebhusayithi yakho noma ibhulogi, kusukela ekubheka izinjini ezinkulu zokusesha njenge-Google uqobo, kanye ne-Yahoo ne-Bing.
Kungenzeka ukuthi ithrafikhi ephawulekayo yenzeke emakhasini akho ewebhu, ngokuqinisekile kunikezwe ukuthi okuqukethwe kwakho kwekhwalithi ephezulu futhi okufanelekile kunokwanele ukuheha isithakazelo esithile kubasebenzisi bangempela ekugcineni ukuvakashela iwebhusayithi yakho noma ibhulogi.
Isiphathimandla esinamandla nokuthembela kweminye imithombo ehloniphekile ehlobanisa nemithombo yewebhu enekhasi eliphakeme i-PageRank izobonwa yi-Google njengesignali ephawulekayo yezinga eliphezulu, ngaleyo ndlela ukwenza iwebhusayithi yakho noma ibhulogi kuzuze ukunikezwa isikhundla esiphezulu sezinga eliphezulu I-SERP.
Isikhundla sokusesha esiphakeme ngokwayo sinikeza ithuba elihle lokuphambanisa ithrafikhi eyengeziwe yewebhu, ngenxa yalokho kubonisa ukukhanya okuluhlaza ekukhanyeni okubanzi ekusesheni kwe-intanethi, ngesikhathi esifanayo ukuvula amakhasimende akho angabonakala angempela, ekugcineni avele ekuthengiseni okukhulu ngezinga.
Dala ukuqwashisa komphakathi okungcono, okuvame ukuthuthukisa ukutholakala kwakho kwe-inthanethi nokufaka igama lebhizinisi elidumile kakhulu lebhizinisi lakho Source .